Isihlanzisi-moya / I-Potable / AP-P01
Lokhu kuhlanza umoya okunesitayela kuhlanza ngokuqinile ukungcoliswa komoya ngokuhlanzwa okunezigaba eziningi, kuhlunga ngempumelelo izinhlayiya ze-PM2.5, izinwele, impova, uthuli nezinye izinto zezinhlayiyana. I-activated carbon layer isusa iphunga nezinto ezinobungozi zamakhemikhali. Futhi kulandelwa ukugxila okuphezulu kwezigidi ezingama-80 pcs / cm³negative ion ekhipha ukudala indawo yehlathi emotweni yakho. Ukuhlanzwa kwemoto yonke kukunikeza indawo ephephile futhi enempilo yokushayela, ake uthokozele uhambo olunempilo.
Izibani ezithambile ebusuku. Idizayini yesitayela ikwenza kube umhlobiso omuhle futhi.
Yakhiwe ngebhethri, ingasebenziseka kunoma yikuphi lapho ufuna ukuyibeka khona.
Isihlanzisi-moya / I-Potable / AP-P02
Isihlanza umoya sakhiwe ngebhethri, ukuthi ungayisa noma ikuphi ukuze uvikeleke. Inomsebenzi wokushaja welanga, amandla ahlanzekile. Ihlanganisa i-carbon esebenzayo ne-ion negative purification, zonke izici ziyakuvikela futhi zihlanze umoya ohlanzekile ophephile kuwe.
Kubuye kube humidifier nephunga diffuser lemoto yakho, igumbi noma indawo yokuhamba. Ikunikeza ukuhambisana okuphelele okungu-100% ohambweni lwakho.
Isihlanzisi-moya / I-Potable / AP-P03
Lesi simisi somoya esihlanzayo sisebenza ngokuhlanza ikhabhoni, sisusa izinto eziyingozi zamakhemikhali namagesi afana ne-formaldehyde, i-benzene nama-VOC, amasudi wemoto entsha. Iphinde isuse nephunga elibi, uma unesilwane, kuyasiza ukususa nephunga laso elingathandeki. Isihlanzisi siqukethe i-ion ion generator ekhiqiza ama-ion aphezulu kakhulu amaminerali ayi-15 wezigidi zama-pcs / cm³ akusebenzela ikamelo elihlanzekile elihlanzekile, asuse izinhlayiya zokungcola, i-PM2.5, uthuli, impova nentuthu. Hlanza igumbi, dala indawo ehlanzekile nenempilo njengokuhlala ehlathini, uqinise ikhono lokuzivikela, ungasongeli kakhulu ekulimaleni okungaba khona. Isebenza nge-3m³- 9m³, isudi enhle yemoto negumbi elincane.
Yenzelwe umsebenzi we-aromatherapy, wenza iphunga olithandayo. Uma uyibeka emotweni, ungajabulela uhambo olumnandi, unciphise ukungezwani, uphumule izinzwa, uhambo olude ngeke luvele lubi futhi lude kakhulu. Ngokubambisana nomsebenzi wokuhlanza, isihlanzisi somoya sikudalela igumbi elinempilo elipholile.
Inesiphathi sefoni, ungayifaka emotweni ukuze uzulazule nge-GPS, noma ngesikhathi sokuphumula ujabulele i-movie kwenye indawo. Inebhethri lomthamo we-1000mAH, kuyaphatheka ukuthi ungayisa noma ikuphi lapho uthanda khona, ujabulele isikhathi sokuphumula. Ungakhohlwa ukuyibeka kwenye indawo engathola ukukhanya kwelanga njengoba kukhokhiswa yilanga, ngakho-ke ngeke ukhathazeke ngenkinga yamandla.
Isihlanzisi somoya semoto esihle, sikulethela uhambo olulula lokushayela.
Khulisa ukukhanya, Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Isitshalo sikhule ukukhanya, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Ukukhanya kwesitshalo, Khulisa i-Lightin,